How'd it happen and more reports?: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ပဟေဠိ ကွင်းဆက်များ ( စ ~ ဆုံး)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ပဟေဠိ ကွင်းဆက်များ ( စ ~ ဆုံး)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အပါအ၀င် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်များ၏ လုပ်ကြံခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ယနေ့တိုင် ပြည့်စုံသော သမိုင်း မှတ်တမ်းကို နိုင်ငံတော် အဆင့်မှ ပြုစုထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိ
စာရေးသူသည် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ကာလတွင် BBC နှင့် ဆက်သွယ်၍ သတင်းများကို ပေးပို့ခဲ့ သောကြောင့် စစ်အစိုးရက ထောင်ချခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လတွင် နောက်ဆုံး အကြိမ် ထောင်မှ ပြန်ထွက်လာသည်။ ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့တွင် နေထိုင်လျက်ရှိပြီး သမိုင်းဆိုင်ရာ သုတေသန ပြုစုချက်များ ရေးသားနေသည်။
>နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကတရားခံမှာ ဦးစောဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ နောက်ကွယ်တွင် နယ်ချဲ့သမား၏ အကွက်ဆင် ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့မှု ရှိခဲ့သည်ဟူသော သမိုင်းအမြင်သည် နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီး ဖြစ်ပွားပြီးခါစကပင် စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းရှိ ကွန်မြူနစ်ဂိုဏ်းရော ဆိုရှယ်လစ်ကပါ ယင်းအမြင်ကို ခပ်လွယ်လွယ် ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဦးနေ၀င်းမြန်မာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်က ဆင်းသွားချိန်မှစ၍ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီး၏ နောက်ကွယ်တွင် အဓိကတရားခံဦးစောသည် နိုင်ငံရေးဆင်ကွက် အတွင်းကျရောက်သွားသူသာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံရေးထောက်ချောက်အတွင်းသို့ ဦးစောရောက်ရှိရန်ဖန်တီးသူမှာ ပြည်ပနယ်ချဲ့သမားသာမဟုတ်ဘဲ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်များ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ယင်းပြိုင်ဘက်များထဲတွင် ဦးနေ၀င်းသည် အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ် သည်ဟူသောသမိုင်းအမြင်တခုထပ်မံပေါ်ထွက်လာပါသည်။ အဆိုပါအမြင်ကိုနိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီးဖြစ်ပွားစဉ် က နိုင်ငံတော်၏ ရဲဗိုလ်ချုပ်တာဝန်ယူထားသူ ဦးထွန်းလှအောင်၏ သားလည်းဖြစ်၍ ထိုစဉ်က နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရားရေးဌာန အတွင်းဝန်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ထောင်မင်းကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ယူခဲ့သူ ဦးသောင်းစိန်၏ သားမက်တော်သူ ဦးခင်အောင်ရေးသားသည့် အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ “Who Killed Aung San?” စာအုပ်တွင် ထုတ်ဖော်တင်ပြထားခဲ့ပါသည်။
စာရေးသူအား ဗိုလ်စက်ရောင်က ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သော နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီးနောက်ကွယ်မှ အဓိက သမိုင်းတရားခံများမှ အထက်ပါသမိုင်းအမြင် ၂ ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော အတွင်းရေး အချက်အလက်သစ်များဖြစ်ပြီး ယင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်စပ်၍ စာရေးသူကိုယ်တိုင် မမျှော်လင့်ဘဲ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီးနှင့် ဆက်စပ်မှတ်တမ်းတချို့အား ထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိသောကြောင့် ပြည်သူတရပ်လုံး သိရှိသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် အချိန်ကျရောက်ပြီထင်၍ ဤဆောင်းပါးကိုရေးသား တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းအမှန်ပေါ်ပေါက်ရန် လိုအပ်သည်ထင်မြင်၍ မည်သည့်ဘက်မျှ မလိုက်ဘဲ သစ္စာတရား လက်ကိုင်ထား၍ ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း ဦးစွာ ၀န်ခံ ကတိပြုပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်များ လုပ်ကြံမှုကြီးကို စစ်ဆေးဖော်ထုတ်လျှင် ဦးစွာပထမ ဦးစောဘ၀နှင့် ၎င်းအား ၂၁-၉-၄၆ နေ့က လုပ်ကြံမှုကို ကြိုတင်သိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဦးစောသည် အောက်တန်းရှေ့နေဘ၀မှ နန်းရင်းဝန်ဘ၀သို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မှီ မြန်မာနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်တွင် ရောက်ရှိအောင်မြင်ခဲ့သော နိုင်ငံရေးသမားတယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ဦးစော၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ယုံကြည်စိတ်ချမှု မရှိသောကြောင့် အာဖရိကတိုက်ရှိ ယူဂန္ဓာနိုင်ငံတွင် ၁၉၄၂၊ ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်မှ ၁၉၄၆ ဇန်န၀ါရီလဆန်းအထိ ၎င်းအား ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါသည်။ ယင်းကာလများအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းသည်လည်း ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟူသော လူငယ်ခေါင်းဆောင်သစ်တယောက်သည် စစ်ပြီးခေတ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာရာ အင်္ဂလိပ်အစိုးရသည် ၎င်းအားယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် နန်းရင်းဝန်ဟောင်းဦးစောအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမြန်ပြန်ပို့ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေးကစားကွက်တခုကို ဖန်တည်းခဲ့ပါသည်။
ဘုရင်ခံ ဆာဒေါ်မန်စမစ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်သော ဖဆပလအဖွဲ့တို့အကြား နိုင်ငံရေးမပြေလည်မှုကို ပုံစံသစ်ပြောင်းရန် ဘုရင်ခံသစ် ဆာဟူးဘတ်ရန့်ကို အင်္ဂလန်မှ ထပ်မံစေလွှတ်ပြီးနောက် အာဏာနေရာ အပေးအယူပြုလုပ်ကြရန် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ တချိန်တည်းတွင် ဖဆပလအများစုပါသော ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် ဖဆပလအား ထိန်းရန် ဦးစောနှင့် သခင်ဗစိန်တို့ကဲ့သို့ ဖဆပလဆန့်ကျင်ရေး အင်အားစုများကို ဘုရင်ခံခန့်ကောင်စီ လူကြီးများအဖြစ် ဆာဟူးဘတ်ရန့်က ခန့်အပ်ရန် စီစဉ်ခဲ့ပါသည်။
ဗိုလ်စက်ရောင် ပြောကြားချက်အရဆိုလျှင် ထိုနေ့ (၂၁-၉-၄၆) စနေနေ့လည်ပိုင်းက ရန်ကုန်ဘဆွေ (ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ Executive Committee အဆင့်ရှိသူ) သည် ၎င်းတို့စခန်းချရာ ပြည်သူ့ရဲဘော်ဌာနချုပ်၊ စစ်ကျန်မော်တော်ယာဉ်များ ပြုပြင်ရောင်းချနေသည့်နေရာ (ယခု ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဓမ္မစေတီလမ်းနှင့် အင်းယားမြိုင်လမ်း၊ ယခု မိုးညှင်းဓမ္မရိပ်သာနေရာသို့) ရောက်ရှိလာပြီး ဗိုလ်စက်ရောင်နှင့် အခြားပြည်သူ့ရဲဘော် ဗိုလ်တယောက်တို့အား ဗဟန်းရွှေဂုံတိုင်ဘက်ရှိ စားသောက်ဆိုင်တဆိုင်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ကျွေးမွေးသမှု ပြုခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။ ဗိုလ်စက်ရောင်တို့မှာ အစားကောင်းများ မစားရဘဲ ပြတ်လပ်နေချိန်တွင် ရန်ကုန်ဘဆွေက ၎င်းတို့အား စေတနာဗလပွဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ မှာယူစားသောက်ရန် ကုန်ကျငွေကို သူ ဒကာခံမည် ပြောသောကြောင့် ၀မ်းသာအားရ အစားအသောက်များ မှာယူခဲ့ကြသည်။
အထက်ပါ အနုနည်း အာဏာဖီဆန်ရေးကို အကန့်အသတ်ဖြင့် လူကြီးများ စီစဉ်ထားချိန်တွင် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ယူနစ် အုပ်စုဝင်လူငယ်များနှင့် ပြည်သူ့ရဲဘော် တက်ကြွလူငယ်အုပ်စုက လွတ်လပ်ရေးအတွက် လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်ရန်အထိ ၂ အုပ်စု လျှို့ဝှက်စည်းဝေး တိုင်ပင်မှုများရှိခဲ့သည်ဟု ဗိုလ်စက်ရောင်က ဆိုပါသည်။ ယူနစ် အုပ်စုမှ ဗိုလ်မောင်မောင်၊ ဗိုလ်အောင်ကြီး၊ ဗိုလ်ချစ်ခိုင် အစရှိသော အရာရှိငယ်များသည် ဦးဘဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့နှင့် ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဂျပန်တော်လှန်ရေး ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ၌ ဗိုလ်နေဝင်းသည်လည်း ယင်းအစုနှင့် နီးကပ်လာသည်။ (တပ်မတော်သမိုင်း၊ စာမျက်နှာ ၉၄ အရ) အကယ်၍ အင်္ဂလိပ်ထံမှ လွတ်လပ်ရေး တောင်းဆိုမရခဲ့၍ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်ရမည်ဆိုလျင် ပြည်သူ့ရဲဘော်ဘက်က စစ်ရေးကို ဦးဆောင်ရန် ဗိုလ်ဖိုးကွန်းနှင့် ဗိုလ်စိန်မှန်ကို ကြိုတင်ရွေးချယ်ကြောင်း အဆိုပြုခဲ့သလို ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဘက်မှ စောရန်နောင် ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို စစ်ရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ် အဆိုပြုခဲ့ကြောင်း၊ စောရန်နောင်ဆိုသော အမည်မှာ လူသိထင်ရှားမဟုတ်၍ ၎င်း၏ဓာတ်ပုံ၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကအစ ပြည်သူ့ရဲဘော်ဘက်က ကြိုတင်သိရှိနိုင်အောင် အသိပေးဖော်ပြရန် တောင်းဆိုသောအခါတွင်မှ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဘက်က စောရန်နောင်၏ ဓာတ်ပုံ၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တို့ကို ပေးခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်စက်ရောင်က ၁၉၄၆ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းကာလက ၎င်း၏ ကိုယ်တွေ့လျှို့ဝှက်ဖြစ်စဉ်များကို စာရေးသူအား ပြောပြခဲ့ပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ပဟေဠိ ကွင်းဆက်များ (အပိုင်း – ၂ )
လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဗြိတိသျှအစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လန်ဒန်ရောက်ခဲ့စဉ်
“စောရန်နောင်ကို အရှင်ဖမ်းမိလျှင် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်လုပ်ကြံခံရမှု ဘယ်လို ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာ ပေါ်မှာပဲဆိုပြီး တို့ပြည်သူ့ရဲဘော်တွေကလည်း ဒီကောင့်ကို လိုက်ရှာတာဘဲ၊ မတွေ့ဘူး။ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဂိုဏ်းသား ပဲခူးဗိုလ်ကြာညွှန့်နဲ့ ဗိုလ်တင်အောင် (မြေပဒေသာစီမံကိန်း အထူးအရာရှိ၊ မာဇဒါဂျစ် ကားမှောက်၍ သေဆုံးသွားသဖြင့် မာဇဒါဂျစ်တင်အောင် ဟုခေါ်သူ) တို့က ပဲခူးဘက်မှာ စောရန်နောင်ကို အလျင် လက်ဦးစွာ ဖမ်းမိ၍ ချုပ်နှောင်ခေါ်ဆောင်လာစဉ် ကားပေါ်မှ ထပ်မံထွက်ပြေးပြန်သဖြင့် ပဲခူး ဆယ်မိုင်ကုန်းထိပ်တွင် ပစ်သတ်လိုက်ရပါသည်ဟူသော ဇာတ်လမ်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်သွားတယ်ကွာ။ ငါ ဒီဇာတ်လမ်းကို မယုံဘူး။ အမေရိကန်သမ္မတ ကနေဒီကို လုပ်ကြံတဲ့ အော့ဇ်ဝဲလ်ဆိုတဲ့ တရားခံကို ကနေဒီအတွက် နာကျည်းဒေါသထွက်နေသူက ထပ်မံသတ်လိုက်သည်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးပါပဲကွာ။ နောက်မှ စဉ်းစားကြည့်တော့ ဦးစောကို မထိတထိ သွားလုပ်ကြံယောင်ဆောင်တဲ့ ရန်ကုန်ဘဆွေလည်း ဆိုရှယ်လစ်ပါတီက EC တယောက်ဖြစ်နေပြီး ငါတို့ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့က ကားကို မလိမ့်တပတ်နဲ့ ယူ စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ တို့ပြည်သူ့ရဲဘော်တွေ အားလုံး ဆိုရှယ်လစ်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးဆင်ကွက်ထဲမှာ စတေးခံခဲ့ရတာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းကို ဘယ်လိုမှ ရှင်းလို့မရဘူးကွာ” ဟု ဗိုလ်စက်ရောင်က ဆက်ပြောပါသည်။
“မင်းကို ထပ်ပြောခဲ့ဦးမယ်။ ဒီအကြောင်းက မမကြည် (ဗိုလ်ချုပ်ကတော်-ဒေါ်ခင်ကြည်) က ငါ့ကိုပြောခဲ့တာပါ” ဟုလည်း ဆိုကာ ၁၉၄၇ ဇူလိုင် ၁၉ တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရစဉ်အချိန်၌ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ငြိမ်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် အချို့ဥရောပသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း၊ အဆိုပါ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၁၉၄၇ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မှ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး သခင်နု ဦးဆောင်၍ ဦးကျော်ငြိမ်း၊ ဦးတင်ထွဋ်၊ ဦးကိုကိုကြီး၊ ဗိုလ်ထွန်းလင်း၊ ဗိုလ်ခင်မောင်ကလေး တို့နှင့်အတူ အခြားသူများလည်းပါဝင်ကြောင်း (၁၂-၇- ၄၇ တွင် ဦးနုပါဝင်သော ကိုယ်စားလှယ်တချို့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသော်လည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ငြိမ်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်အချို့ ဥရောပတွင် ကျန်ရှိနေခဲ့သည်)၊ ဗိုလ်ချုပ်တို့ လုပ်ကြံခံရသည့် ကြေးနန်းသတင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ငြိမ်းတို့အဖွဲ့ထံ ပေးပို့ရောက်ရှိချိန်မှာ ၄င်းတို့သည် ဧည့်ခံပွဲတခုတွင် သောက်စားနေကြချိန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ် လုပ်ကြံခံရသည့် သတင်းကြားရသည့်အချိန်တွင် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်တဦးသည် မူးမူးရူးရူးဖြင့် “ငါတို့အကြံအောင်ပြီ” ဟု ထအော်ခဲ့ကြောင်း သတင်းကို မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် အချို့ထံမှပင် ထူးထူးခြားခြား ဒေါ်ခင်ကြည် ရရှိထားကြောင်း ပြောကာ “ငါ့ ခင်ပွန်းကို ဒီလူတွေ တော်တော် ယုတ်မာကြတာပဲလို့ မမကြည်က ပြောခဲ့ဖူးတယ်ကွာ” ဟု ဗိုလ်စက်ရောင်က စာရေးသူကို ရင်ဖွင့်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဗိုလ်စက်ရောင်က စာရေးသူအား “ငါ ရန်ကုန်ဘဆွေကို ဦးစောကို အပိုင်သတ်နည်းအဖြစ် သင်ပေးခဲ့တဲ့ လက်ပစ်ဗုံးထောင်နည်းဟာ ဦးတင်ထွဋ် လုပ်ကြံခံရပုံနဲ့ ပုံစံတူ ဖြစ်ခဲ့တယ်ကွ။ နောက်ပိုင်း ဒီကောင်ကြီးကို ပြန်တွေ့တော့ မင်း ငါပြောတဲ့နည်းအတိုင်း ဦးတင်ထွဋ်ကို စစ်တပ်မှာ နေရာ မပေးချင်လို့ သူ့ကို ရှင်းလိုက်တာ မဟုတ်လားလို့ မေးကြည့်တယ်။ ဒီကောင်ကြီးက ၀န်လည်းမခံ၊ ငြင်းလည်း မငြင်းဘဲ ပြုံးနေတယ်ကွ” ဟူသော စကားသံကို ကြားရသည့်အခါ စာရေးသူ မိမိ၏ ထူးခြားသော ကံကြမ္မာကို အံ့သြ တုန်လှုပ်သွားမိပါသည်။ မိမိအား အမှန်တရားဘက်က လိုက်သည့်ရှေ့နေဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါဟူသော သြ၀ါဒနှင့် ရှေ့နေပညာ သင်ပေးခဲ့သော လက်ဦးဆရာများမှာ တရားခံမပေါ်ဘဲ အာဇာနည်ဗိမ္မာန်တွင် မြေမြှုပ်ခံသူ ဦးတင်ထွဋ်၏ ညီ၊ ဦးစော၏ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဆရာကြီးဦးကျော်မြင့်၊ ၄င်း၏သမီး ဆရာမဒေါ်တင်တင်မြင့်နှင့် ဆရာဦးရဲထွန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု တရားခံအစစ်အမှန်ကို မင်း ဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့ ငါ မင်းကို ဒီ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ထုတ်ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟု ဗိုလ်စက်ရောင် တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူ ကျနော်သည် အဆိုပါ ဦးတင်ထွဋ်နှင့်တကွ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌ မိသားစုနှင့် ပတ်သက်နေသူဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်စက်ရောင် တယောက်သိမသွားခဲ့ပါ။အဆိုပါ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်သည့် ဦးတင်ထွဋ်သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှုကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေစဉ် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း တည၌ ယခု ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းနှင့် အနော်ရထာလမ်းထောင့်အနီး အတွင်းဝန်ရုံးကို လှမ်းမြင်နိုင်သည့်နေရာတွင်ပင် ကားပေါ်တွင် ထောင်ထားသော လက်ပစ်ဗုံး ပေါက်ကွဲ၍ ဒရိုင်ဘာနှင့်အတူ သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ ၄င်းတို့၏ အလောင်းကို ဖဆပလအစိုးရက ယခင် လုပ်ကြံခံရသော နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အုတ်ဂူနောက်ဖက်တွင် ထပ်မံ မြှုပ်နှံပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် အကြောင်းပြချက် မရှိ၊ တရားခံ မရှိဘဲ သေဆုံးသွားသူ ၂ ဦးအား ဖဆပလအစိုးရသည် အာဇာနည်ဗိမ္မာန်တွင် ဘာကြောင့်နေရာချထားခဲ့သည်မှာ စဉ်းစားလျှင် ခေါင်းစားမည်အမှန် ဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်စက်ရောင်သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား နိုင်ငံရေး ထောင်ချောက် ဆင်ကွက်ဖြင့် အဓိကလုပ်ကြံသူ အစစ်သည် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်များသာဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာ ယုံကြည်စွာဖြင့် စာရေးသူအား အင်းစိန်ထောင် ၆ တိုက်အတွင်း ၁၉၄၅/၄၆/၄၇ ခုနှစ် နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကို သုံးသပ်၍ အကြိမ်ကြိမ် ပြောခဲ့ပါ၏။ စာရေးသူသည် လူကြီးတယောက် သူ ပြောချင် ရင်ဖွင့်ချင်တာ ပြောပါစေ ရင်ဖွင့်ပါစေ သဘောဖြင့် နားထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၈ ပေပတ်လည် အခန်းကျဉ်း၌ တံခါး၂ ထပ်အတွင်း အရပ် ၅ ပေခွဲကျော်မှ ၅ ပေ ၁၁ လက်မ ထိရှည်သော လူ ၃ ယောက်နှင့်အတူ စာရေးသူတို့ ၄ ယောက် ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း နေရစဉ် ဤဇာတ်လမ်းများကို နားထောင်နေရသည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း အသစ်ပြောင်းလာသော ထောင်ပိုင်ဦးဘိုကြည်ထံမှ စာရေးသူအား တယောက်တည်း ထားရမည်ဟူသော ညွှန်ကြားချက် ရောက်လာပြီးနောက် ဗိုလ်စက်ရောင်နှင့် သူ့အမှုတွဲများ ဗိုလ်ကြီးစိုင်းဝင်းကျော်အခန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားကြရသည်။ ရက်ပိုင်းအတွင်း နှလုံးရောဂါဖောက်၍ အင်းစိန်ထောင်ဆေးရုံသို့ ပြောင်းရွှေ့ထားရာမှ ဗိုလ်စက်ရောင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်။
ဗိုလ်စက်ရောင် အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ကွယ်လွန်ပြီး မကြာမီ လယ်ဝေးသခင်ကြည်ရှိန် တယောက် ထောင်ထဲရောက်လာသည်။ စာရေးသူသည် ဗိုလ်စက်ရောင်ပြောသော နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုဆိုင်ရာ သမိုင်းကြောင်းကို စေ့စေ့စပ်စပ် မမေးနိုင်ခင် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားသော ဗိုလ်စက်ရောင်၏အဖြစ်ကို သင်ခန်းစာယူ၍ လယ်ဝေးသခင်ကြည်ရှိန် မကွယ်လွန်မီ ဗိုလ်စက်ရောင်ပြောသော နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု သမိုင်းအထောက်အထားကို မှန် မမှန် ၄င်း၏ထင်မြင်ချက် ပေးပါရန်နှင့် နောင်လာနောင်သားများ အဖြစ်မှန် ဆင်ခြင်နိုင်ရန် သိသမျှ ပြောပါရန် မိမိစိတ်ချရသော ၀န်ထမ်းမှတဆင့် အကူအညီ တောင်းခံခဲ့ပါသည်။
သခင်ကြည်ရှိန်ထံမှ စာတိုတစောင်ကို လက်ခံဖတ်ရှုရသောအခါ ဗိုလ်စက်ရောင်ပြောသည်ထက် ပိုမိုတိကျသော အချက်အလက်များကို သိခွင့်ကြုံခဲ့ပါသည်။
သခင်ကြည်ရှိန်သည် ဦးစောထံမှ သိမ်းဆည်းရမိသော ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ စစ်ရေးခေါင်းဆောင် စောရန်နောင်၏ သေနတ် နံပါတ်ကို အလွတ်ရနေပြီး စာရေးသူထံ စာနှင့် ရေးပေးခဲ့ပါသည်။ စောရန်နောင်အား ပဲခူးဆယ်မိုင်ကုန်းတွင် ထွက်ပြေးသဖြင့် လိုက်ဖမ်းစဉ် ပစ်သတ်လိုက်ရသည်ဆိုသည်မှာ မမှန်ကြောင်း၊ တမင်သတ်ပစ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ စောရန်နောင်၏ လုပ်ရပ်သည် မိမိတို့ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီအတွက် သိက္ခာကျစရာ ဖြစ်နေ၍ ဇာတ်လမ်းမရှုပ်အောင် ဗိုလ်ကြာညွှန့်တို့ သတ်ပစ်လိုက်တာဟု အတိအကျပင် စာပြန်ခဲ့ပါသည်။
စာရေးသူက သခင်ကြည်ရှိန်ထံ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုအကြောင်း စုံစမ်းရခြင်းမှာ ၄င်းသည် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီမှ ပဲခူးရိုးမ အရှေ့ခြမ်းတွင် နေမ၀င်ဘုရင်တဆူပမာ တန်ခိုးထွားခဲ့သူဖြစ်၍ သူနှင့်ခေတ်ပြိုင် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင် ရန်ကုန်ဘဆွေတို့သည် ရင်းနှီးသူများဖြစ်ကြောင်း၊ ဆိုရှယ်လစ်ဂိုဏ်းသား ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်အား မိတ္ထီလာမှ ကရင်ပြည်နယ်သံတောင်ဘက်သို့ ကေအင်ဒီအိုများ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားစဉ် ရန်ကုန်ဘဆွေက ကယ်တင်ရန် ကြိုးစားသော အရပ်သားပျောက်ကြား ကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့များတွင် သခင်ကြည်ရှိန်၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်ဘဆွေရေးသော “ချီလေသော်လည်း” နှင့် “တိုက်ယူရတဲ့ မျက်ရည်တပေါက်” စာအုပ်များတွင် အရိပ်အမြွက် ဖော်ပြထားခဲ့သည်ကို သတိရ၍ မှန်းဆ မေးမြန်းကြည့်ခဲ့ရာတွင် အထက်ပါအတိုင်း ပြည်သူ့ရဲဘော် ဗိုလ်စက်ရောင်၏ ပြောကြားချက်ကို ဆိုရှယ်လစ်ဂိုဏ်းသား သခင်ကြည်ရှိန်က ထပ်မံဖြည့်စွက်ထောက်ခံချက်ကို စာရေးသူ ရရှိလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စာရေးသူ ပထမအကြိမ် ထောင်မှလွတ်သော ၁၉၉၇ နှစ်ကုန်ပိုင်းအချိန်ထိ ဗိုလ်ကြာညွှန့် အသက်ထင်ရှား ရှိပါသေးသည်။ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု အမှုတွဲများကို ဦးစွာလေ့လာလိုသေး၍၄င်း၊ မဆလ/န၀တခေါင်းဆောင်များနှင့် ဗိုလ်ကြာညွှန့် အဆက်အသွယ်ရှိသေးသည်ဟူသော သတင်းများကြောင့်၎င်း၊ ဗိုလ်ကြာညွှန့်ကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန် လက်တွန့်နေခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုနှင့် သက်ဆိုင်သောအမှုတွဲများမှာလည်း ထူးထူးခြားခြား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။ အင်းစိန်မြို့နယ်ကို ကေအင်ဒီအိုများ သိမ်းထားစဉ်က ထောင်နှင့် တရားရုံးမှတ်တမ်းများ မီးထဲပါသွားသလို သိရပြီး စာရေးသူလည်း အခြားသူများ၏ ပါးစပ်ပြော ရာဇ၀င်များကို ခပ်လွယ်လွယ် ရေးချင်စိတ် မရှိ၍ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ပဟေဠိလျှို့ဝှက်ချက်များကို ရင်ထဲမှာသာ သိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု အမှုတွဲမူရင်း (သို့မဟုတ်) မိတ္တူမှန်အမှုတွဲကို ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်တဦး၏ ဂိုဒေါင်တလုံးစာမျှ ရှိသော စာအုပ်ပုံများထဲတွင် မြင်တွေ့ဖူးကြောင်း အဆိုပါ ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ သွေးသားတဦးက စာရေးသူအား ပြောဖူးပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ၏ အတွင်းရေးများကို တူးဆွရမည့်ကိစ္စဖြစ်၍ အဆိုပါမိသားစုထံမှ အကူအညီ မတောင်းခံလိုတော့ပါ။
၁၉၆၃ ခုနှစ် သမ္မတကနေဒီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွင် လီဟာဗေးအော့စ်ဝဲ တဦးတည်း ဟုတ် မဟုတ် အမေရိကန် အစိုးရနှင့် ပြည်သူများသည် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု မှတ်တမ်းများ ပြန်လည် စိစစ် သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သလို လျှို့ဝှက်အထောက်အထား စာရွက် ၆ သောင်းအား ပြည်သူလူထုသို့ အသိပေး ပြသခဲ့သည့်အဖြစ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူများနှင့် ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရတို့၏ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအ၀င် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များအား လုပ်ကြံမှုအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု အတိုင်းအတာသည် မနှိုင်းယှဉ်အပ်သော ကွာခြားမှုကဲ့သို့ ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းတရားကိုလည်း အံ့သြရပါသည်။ ထိုကြောင့် ပို၍ စူးစမ်းဆင်ခြင်ရပါသည်။
၁၉၈၉/၉၀ ၀န်းကျင်က အင်းစိန်ထောင်ထဲတွင် ဗိုလ်စက်ရောင် ပြောပြခဲ့သော နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု တရားခံ အစစ် မူလဇစ်မြစ်ကို သူနှင့် သခင်ကြည်ရှိန် ပါးစပ်ပြောဖြင့် ဖော်ထုတ်ရန် ဆန္ဒမရှိသော စာရေးသူအတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် သာယာဝတီထောင်အတွင်းရှိ စာရေးသူထံ တိုက်ခန်းအတူနေ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဦးမောင်မောင်အေး မိသားစုက ဖတ်ရှုရန် ပေးပို့လိုက်သော ဂျာနယ်ဟောင်းတစောင်မှ မမျှော်လင့်သော အထောက်အထားတခုကို စတင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်စက်ရောင်နှင့် သခင်ကြည်ရှိန်တို့ နှုတ်မှပြောခဲ့သည့် စောရန်နောင်ဆိုသူ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ စစ်ရေးခေါင်းဆောင်၏ အကြောင်းသည် နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု အမှုတွဲတွင် စုံထောက်မင်းကြီး ဦးထွန်းလှအောင်အား ဦးစော၏ရှေ့နေ ကားတစ်ဘက်နက်(ဗာတာနစ်)၏ မေးမြန်းချက်နှင့် ဦးထွန်းလှအောင်၏ အဖြေတို့တွင် ပါဝင်နေကြောင်း အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် သာယာဝတီထောင်ထဲရှိ စာရေးသူထံ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။
“၃၀-၁၀-၄၇ ရက်စွဲပါ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ မှတ်တမ်း၊ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီး၊ (ပြည်ထောင်စု နှင့် ဦးစော) သတင်းမှတ်တမ်းတင်၊ သတင်းထောက် မေမြို့ချစ်ဆွေ။
၂၀-၃-၂၀၁၁ တနင်္ဂနွေ Monitor (စာ-၁၄-၁၅)
“စုံထောက်မင်းကြီး ဦးထွန်းလှအောင်၏ အစစ်ခံ ထွက်ဆိုချက်”
တရားခံ ဦးစော၏ ရှေ့နေ(၁) Curtis Bennett (ကားတစ်ဘက်နက်) (၂) Vertanner (ဗာတာနစ်) တို့၏ မေးမြန်းချက်နှင့် ဦးထွန်းလှအောင်၏ အစစ်ခံ ထွက်ဆိုချက်
- ၁၉၄၇ ဇွန် ၄ ရက်မှာ စုံထောက်မင်းကြီး ဖြစ်ပါသည်။
စုံထောက်မင်းကြီး မလုပ်ရခင်က ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း ဒုတိယရာဇ၀တ်မင်းကြီး ဖြစ်ပါသည်။
- ပုလိပ်သပိတ် အင်အားမပြခင် အစည်းအဝေးတခု မြို့တော်ခန်းမမှာ လုပ်သေးသလား၊ ၄င်းအစည်းအဝေးမှာ ဦးအောင်ဆန်းက ၀မ်းမောင်အကြောင်းကို ပြောတယ်မဟုတ်လား။ … မမှတ်မိပါ။
- ဂျပန်ခေတ်တုန်းက သခင်ထွန်းအုပ်နဲ့ သခင်ဗစိန်တို့ကို ဗမာပြည်မှ နှင်ပစ်တယ် မဟုတ်လား။ … သူတို့နှစ်ယောက် ဗမာပြည်မှ ထွက်သွားကြတာကို သိပါတယ်။ သူတို့ကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးတယ် မပေးဘူး မပြောတတ်ပါ။
- ပဲခူးဘက်မှာ စောရန်နောင်ဆိုတဲ့လူအကြောင်းကို သိပါသလား။ … စောရန်နောင်ကို ထွက်ပြေးမယ်လုပ်လို့ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်တာသာ တွေ့ရပါတယ်။ ပုလိပ်က ဖမ်းတာ မဟုတ်ပါ။ ပစ်ခတ်တဲ့အမှုကို ပုလိပ်က စုံစမ်းသေးသလား မသိပါ။
- စောရန်နောင်ကိုဘယ်သူဖမ်းသလဲ။ … သူ့ကို အရံပြည်သူ့ရဲဘော် အထူးပုလိပ်အဖွဲ့က ဖမ်းပါတယ်။
- တရားခံဦးစောရဲ့ အိမ်ကို ရှာဖွေပြီးတော့ အခြားခေါင်းဆောင်များရဲ့ အိမ်တွေကိုလဲရှာဖွေသေးတယ် မဟုတ်လား။ …. ရှာပါတယ်။ အရှာခံရတဲ့ အိမ်အချို့မှာ ဒေါက်တာဗမော်၊ သခင်ဗစိန်တို့လို ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အိမ်အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။